प्रेम गर्नेहरुका लागि सधै प्रेमदिवस - नेपालबहस
प्रेम गर्नेहरुका लागि सधै प्रेमदिवस
| १९:३६:३३ मा प्रकाशित
आज १४ फेब्रुअरी, विश्वभर भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रेमदिवस मनाइँदैछ । औपचारिक रुपमा ईस्वी सम्वत २६९ रोमनबाट सुरु भएको भ्यालेन्टाइन डे को अहिले प्रेमील जोडीहरुका लागि एकउत्सवको रुपमा परिणत भएको छ । विशेष गरी युवायुवतीले यसलाई विशेष चाडकै रुपमा मनाउने गरेको पाईन्छ ।
पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा पनि युवावर्गले प्रेमदिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने गरेका छन् । यो दिन प्रेमीप्रेमिकाले एकअर्कालाई विभिन्न उपहार दिएर माया दर्शाउने तथा आफूलाई मनपरेका व्यक्तिसमक्ष प्रेमप्रस्ताव पनि राख्ने गर्दछन् । यसलाई पश्चिमा संस्कृति अर्थात आयतित संस्कृति पनि भन्ने गरेको पाईन्छ ।
विशेषगरि पश्चिमा देशहरुमा मनाइँदै आएको यो दिवस नेपाली समाजले भने सहजै पचाउन सकेको छैन् । भलै शहरी युवाहरुले यसलाई महत्वका साथ लिए पनि अन्यले यसलाई विदेशी चाड भनी त्यति महत्व दिएको पाईदैन् । कतिपयले यो पर्वले नेपाली समाजमा विकृति त्याएको समेत भन्ने गरेका छन् । तर जेहोस् माया गर्ने जोडीहरुका लागि भने भ्यालेन्टाइन डे जीवनकै महत्वपूर्ण क्षण बन्ने गरेको देखिन्छ ।
भ्यालेन्टाइन डे को ईतिहास
भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणयदिवसका बारेमा विभिन्न कुराहरु भन्ने गरेको पाईन्छ । यो दिवससँग एउटा दुखान्त प्रेम कथा जोडिएको छ । तत्कालिन रोमन सम्राट क्लोडियस द्धीतियले आफ्ना सैनिकलाई प्रेम तथा विवाह गर्न रोक लाएका थिए । प्रेम तथा विवाहले सैनिक कमजोर हुन्छन् तथा युद्धसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना बाहिर सार्वजनिक हुन्छ भन्ने धारणाले सम्राट क्लोडियसले प्रेम तथा विवाहमा रोक लगाएका थिए ।
तर सम्राटको नियम मन नपराउने मध्ये रोमनका पादरी सन्त भ्यालेन्टाइनले प्रेमको पक्षमा आवाज उठाए । उनले प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्दै धेरै सैनिकको सार्वजनिक रुपमा विवाह गराए । सम्राटले उनलाई पक्राउ गरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाएर जेलमा राखे । जेलमा रहँदा सन्त भ्यालेन्टाइनको जेलरकी दृष्टिबिहीन छोरीसँग माया बस्यो । आफूलाई मृत्युदण्ड दिनुअघि सन्त भ्यालेन्टाइनले लभ फ्रम योर भ्यालेन्टाइन भन्ने हस्ताक्षरसहितको प्रेमपत्र आफ्नी प्रेमिका अथार्त जेलरकी छोरीलाई दिएको कथन छ ।
उनले आफ्ना दुवै आँखा प्रेमिकालाई दिएर मृत्युदण्ड स्वीकार गरेका थिए । उनलाई सन् २६९ को फेब्रुअरी १४ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । यही दिनको सम्झनामा सन्त भ्यालेन्टाइने प्रेमका लागि गरेको त्यागको सम्झना गर्दै विश्वभर हरेक वर्ष १४ फेब्रुअरीमा प्रेमदिवसको रुपमा भ्यालेन्टाइन डे मनाउने गरिएको हो ।
भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको दुई सय २९ वर्षपछि सन् ४९८ मा इसाइ धर्मगुरु पोप जेलासिएसले भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा दिवसकै रुपमा मनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि इंग्ल्याण्ड र फ्रान्स हुँदै पछिल्लोसमय विश्वभर १४ फेब्रुअरीलाई भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रेमदिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
हप्ताभरी नै प्रेम दिवस
पहिला पहिला फेब्रुअरी १४ अर्थात एकदिनलाई भ्यालेनटाइन डे भनिन्थ्यो । अहिले साताव्यापी रुपमा यो पर्व मनाइन्छ । यसको सुरुवात रोज डेबाट सुरु हुन्छ । फेब्रुअरी ७ का दिन रोज डे मनाउने गरिन्छ । जोडीहरुले उपहारस्वरुप गुलावको फूल दिने गरिन्छ । आफ्नो प्रेमभावना व्यक्त गर्ने माध्यम हो गुलाफको फूल ।
विशेषत रातो गाढा रंगको गुलाफको फूल उपहार स्वरुप दिने गरिन्छ । फेब्रुअरी ८ मा प्रपोज डे मनाईन्छ अर्थात प्रेमप्रस्ताव राख्ने दिन । आफुले मन पराएका व्यक्तिहरुलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने गरिन्छ । । फेब्रुअरी ९ यसलाई चकलेट डे को रुपमा मनाईन्छ । यस दिन जोडीहरुले आफ्ना प्रेमीप्रेमीकालाई चकलेट दिएर सम्बन्ध मजबुत बनाउने गर्छन् ।
त्यसैगरी फेब्रुअरी १० मा टेडी डे मनाईने गरिन्छ । यो दिनमा टेडी टोयज दिएर प्रेमलाई थप बलियो बनाउन सकिन्छ । फेब्रुअरी ११ यस दिनलाई प्रमिस डे अर्थात वाचा गर्ने दिन भनिन्छ । एकअर्काको माया पक्का होस् भनेर जोडीहरुले बाचा गर्ने गर्दछन् । फेब्रुअरी १२ यो दिनलाई चुम्बन डे भनिन्छ । प्रेमी प्रेमीकाहरुले एकअर्कालाई चुम्बन गरेर सच्चा प्रेमको संकेत गर्न सक्दछन् ।
फेब्रुअरी १३ यस दिनलाई हग डे अर्थात अंकमाल गर्ने दिनको रुपमा मनाईन्छ । जोडीहरुले अंकमाल गरेर आफ्नो सम्बन्धलाई थप कसिलो बनाउन सक्दछन् । फेब्रुअरी १४ यसलाई भ्यालेनटाइन डे अर्थात प्रेमदिवसको रुपमा मनाईन्छ । प्रेम गर्नेहरुका लागि यो सबैभन्दा ठुलो उत्सव हो । यस दिनमा मनपरेको मान्छेलाई कुनै पनि उपहार दिएर सम्बन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउन सकिन्छ ।
भन्ने गरिन्छ, प्रेममा न त भुगोल हुन्छ न जात नै । प्रेमको कुनै सीमा हुँदैन । प्रेम आफैमा सर्वव्यापी हुन्छ । प्रेममा भित्री भाव स्नेह हुन्छ । प्रेममा र्सिफ प्रेम हुन्छ । आजका दिनमा युवाहरुले एकअर्काबीच व्यक्त गर्न नसकेको प्रेमलाई व्यक्त गर्ने र प्रेममा भएका जोडीले माया अझ प्रगाढ बनाउन आफुले जाने जतिको कसरत गर्ने गर्दछन् । सप्ताहव्यापी रुपमा नै मनाउने प्रेमदिवसमा विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलाप गर्दै आफुले माया गर्नेहरुलाई खुशी बनाउने कोशिस गरिन्छ ।
भन्ने गरिन्छ, माया गर्नेहरुका लागि वर्षभरी प्रेमदिवस । ती माया गर्ने मनहरुका लागि प्रेमदिवस नै आवश्यक पर्दैन, वर्षभरी नै आफ्नो प्रेमलाई मजबुत बनाईराख्न । एकदिनको माया अनि अन्य दिनको घृणा के मनाउनु र प्रेमदिवस । सम्बन्ध बलियो बनाईराख्न महंगो उपहार होईन्, एकअर्काको साथ र विश्वास चाहिन्छ ।
प्रेमदिवसले बोकेको बिकृति
भन्ने गरिन्छ, प्रेम अन्धो हुन्छ, मायामा सबै कुरा जायज हुन्छ । प्रेममा रोमान्स हुन्छ, तर रोमान्समा प्रेम नहुन सक्छ । रोमान्सले प्रेमको मिठास बढाइदिन्छ । फेरि रोमान्सबिनाको प्रेममा दिगोपन नहुन सक्छ । अहिले रोमान्सका लागि मात्र गरिने स्वार्थी प्रेमको बिगबिगी भने बढ्दैछ । प्रेमदिवसको बाहानामा स्वार्थीहरू मोजमस्तीमा डुब्छन् ।
यसबाट साँचो प्रेम गर्न खोज्नेहरूले ख्याल राख्न आवश्यक छ । कसैका बारेमा राम्रोसँग नबुझी, उसको स्वार्थी प्रेममा विश्वास गर्दा धोका भएका हजारौं उदाहरणहरु हामीले पाउन सक्छौ । सच्चा प्रेम गाँसेकाहरुले पनि धोका पाउन सक्दछन् । स्वार्थी प्रेमका कारण प्रणयदिवस मनाउने शैलीमा समेत केही परिवर्तन आएको छ ।
प्रविधिमा आएको ठूलो परिवर्तनका कारण प्रेमका सम्बन्धहरुमा पनि परवर्तनहरु आएका छन् । छिनमा प्रेममा पर्ने, छिनमा बिछोड हुने, फेरि अर्कोसँग सम्बन्ध बढाउने कार्यमा सामाजिक सञ्जालले पुलको काम गर्दा प्रेम शब्दको महत्व नै घटेको छ ।
पछिल्यो समय प्रेमका नाममा युवा पुस्ताहरुले गरेका विभिन्न खालका क्रियाकलापहरुले समाजमा नकारात्मक सन्देशहरु फैलिरहेका छन् । प्रेमका नाममा स्वार्थका लागि जोडिएका सम्बन्धहरु स्वार्थ पुरा भएपछि छुटिने गर्दछन् । यसले कयौं युवतीहरुको जीवन नै जोखिममा पुगेको छ ।
यो संसार चलेको छ त प्रेम र विश्वासले । यदि प्रेम नहुने हो त मानव जीवनको कल्पना समेत गर्न सकिन्न । अहिले प्रेमदिवसको नाममा बढदै गएको विकृतिले समाजलाई नराम्रो बाटोतर्फ डोर्याउन सक्छ् । त्यसैले प्रेमका नाममा भएका विकृतिमाथि हामी मानवहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
आज प्रणय दिवस, नेपासहित विश्वभर एकअर्काप्रति प्रेम साटासाट गरी मनाइँदै २ हप्ता पहिले
ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे ! डियर जिन्दगी !! २ हप्ता पहिले
गोरखामा एकै परिवारका तीन जना मृत फेला ! ६ दिन पहिले
खेतमा कालो प्लास्टिकमा गाडेको १८५ राउण्ड गोली फेला ३ हप्ता पहिले
नागरिक लगानी कोषले साढे ३ लाख कित्ता हकप्रद शेयर लिलाम बिक्री गर्दै, कसले आवेदन दिन पाउने ? ४ दिन पहिले
कर्णालीमा ५ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाकाे पुष्टि, ४२ जना क्वारेन्टाइनमा ८ महिना पहिले